Wajiga labaad ee mashruuca taageerraya Qoysaska Ayaxa saameeyay oo la daahfuray – BAXNAANO
BAXNAANO > Article > Wajiga labaad ee mashruuca taageerraya Qoysaska Ayaxa saameeyay oo la daahfuray
November 6, 2021 admin Article
Baydhabo , November 6, 2021- Munaasabad ka dhacday magaalada Baydhabo ee Dawlad-gobolleedyada Koonfurgalbeed ayaa Sabtida maanta 6 bisha November, 2021 waxaa lagu daahfuray wajiga labaad ee mashruuca qoysaska uu saameeyey Ayaxa.
Wasiirrada Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Dawlad-gobolleedyada Dalka , Puntland, Jubbaland,Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfurgalbeed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu daahfuray mashruuca ayaa boggaadiyay taageerrada Dawladda ee Dadka nugul iyo kuwa uu saameeyey Ayaxa.
“Mashruucan caawinta dadka Ayuxu saameeyay wuxuu ka caawinayaa bulshada aadka saboolka u ah inay ku negaadaan deegaannadooda dibna u wataan noloshooda beeraha, xoolaha iwm.Waxaan haddaba ka rajaynayaa mas’uuliyiinta Dawlad-goboleedyadu inay doorkooda shariifka ah ka qaataan Meelmarinta hawlahan bulshada nugul loogu adeegayo.” ayuu yiri Wasiir Cabdiwahaab Ugaas Xuseen.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfurgalbeed , ahna ku-simaha Madaxweynaha , Cali Saciid Fiqi ayaa ku tilmaamay daahfurka wajiga labaad ee mashruucan inuu door weyn ka qaadanayo ka hortagga saameyn ay Bulshada kala kulmaan dhibaatooyinka uu u geystay Ayaxa.
“ Mashruucan oo ujeeddadiisu tahay Bulshada inaysan deegaannadooda ka barakicin, wuxuu sidoo kale Bulshada kalsooni ku siinayaa sida ay Dawladda diyaar ugu tahay ka jawaabida marxadaha deg degga ah ee saameynta bulsho geysta.” ayuu yiri Guddoomiye Cali Fiqi oo si rasmi ah markaa u daahfuray mashruuca.
Mashruuca si degdeg ah uga jawaabidda masiibooyinka saameeya bulshada , ayaa qeyb ka ah siyaasadda Ilaalinta Bulshada ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Federaalka , gaar ahaan barnaamijka Baxnaano.